Bati Water Fefa Milk Pasterization Machine - China Qingdao Machinery uqinise
Lo matshini pasterization bath amanzi yenziwa ekumgangatho ophezulu SUS304 steel.The umnatha steel stainless ibhanti ngamandla aphezulu kunye luthambe phantsi, akukho lula ukuba ukugqabhuza kunye nokugcinwa lula. Iqondo lobushushu kunye isantya adjustable ngokwemfuneko ubugcisa bemveliso. Le ibaleka mshini kakuhle. Le mveliso pasterization hayi kuphela kwaphucula ukusebenza nzala kodwa isonjululwe ingxaki inzalo engaphelelanga kwaye ezimagqagala leyo okubangelwa lomphakamo oluzenzekelayo elisezantsi. Le mveliso ...
Ngokuhlamba kwamanzi umatshini pasterization yenziwa ekumgangatho ophezulu SUS304 steel.The umnatha steel stainless ibhanti ngamandla aphezulu kunye luthambe phantsi, akukho lula ukuba ukugqabhuza kunye nokugcinwa lula. Iqondo lobushushu kunye isantya adjustable ngokwemfuneko ubugcisa bemveliso. Le ibaleka mshini kakuhle.
Le mveliso pasterization hayi kuphela kwaphucula ukusebenza nzala kodwa isonjululwe ingxaki inzalo engaphelelanga kwaye ezimagqagala leyo okubangelwa lomphakamo oluzenzekelayo elisezantsi.
Umgca imveliso isebenzisa ubuchwepheshe pasterization. Esetyenziswa imifuno zifakwa, libya-lobushushu iimveliso inyama, soy iimveliso iimbotyi zobisi, ijeli kunye nezinye ukutya neziselo ephantsi-lobushushu nzala.
Ukuba abathengi ufuna ukupakisha ngqo imveliso, singakwazi ukudibanisa umgca womoya yokomisa acocekileyo kuwo.
Previous: Zombane okanye Steam Tshisa Hot Air Food Ukuqwayita Machine
Okulandelayo: Meat Food Defrosted Equipment
100l nkqo esisodwa
18l Okanye 23l zamazinyo esisodwa
Esisodwa For Ukunkonkxa
Esisodwa For Instrument Surgical
Esisodwa Horizontal Industrial
Sale esisodwa Industrial
Esisodwa Machine amazinyo
Esisodwa Steam Machine
Esisodwa Nge Manual
Oluzenzekelayo esisodwa Horizontal Industrial
Carbon Fiber esisodwa
Ce Certificate Medical Yamazinyo esisodwa Price
Cheap esisodwa Machine Price
Esisodwa Composite For Sale
Zezindlu Steam esisodwa
Ongathethekiyo ephathekayo Steam esisodwa
Ngakumbi Steam esisodwa
Yamazinyo esisodwa Type B
Zamazinyo Steam esisodwa
Digital nkqo Type esisodwa
Medical esisodwa Instrument
pa ubisi sterizer
Mini esisodwa Machine
ubisi umatshini pasterization
Esisodwa ephathekayo For Sale
Ephathekayo Steam esisodwa
Esisodwa Small ephathekayo
Stainless wokucoca esisodwa
Umphunga esisodwa ephathekayo
Namanzi babethi esisodwa
Table Top esisodwa
Cleaner Ukuqwayita esisodwa
Ezincamathelayo Pump For esisodwa
Nkqo Laboratory esisodwa